जब पहिलो पटक आर्यनलाई भेट्न जेल पुगे शाहरुख खान, १८ मिनेट के गरे कुराकानी ? – Sandesh Press
October 21, 2021 167
यसअघि बुधबार मात्र त्यहाँको एक अदालतले जमानतमा रिहा हुनका लागि आर्यनले गरेको अपिललाई खारेज गरिदिएको थियो । मुम्बईको आर्थर रोड पुगेका साहरुखले त्यहाँ १८ मिनेट छोरासँग कुराकानी गरेको भारतीय मिडियाले लेखेका छन् । ३ अक्टोबरमा क्रुजमा ड्रग पार्टी गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका आर्यनसँग त्यसपछि साहरुख खानको यो पहिलो भेट हो ।काठमाडौं । लगातारको वर्षाले सप्तरीका १८ पालिकाका धानबालीमा क्षति पु-याएको छ । काटेर खेतमै रहेका अवस्थामा धानबाली डुबानमा परेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् ।
Prevकरिश्माले भेटिन् केपी ओली, एमाले प्रवेश गर्न लागेकी हुन् ?
Nextसप्तरीमा वर्षाले धानबालीमा क्षति, देखियो यस्तो कारुणिक दृश्य, हेर्नुहोस